दुष्ट भविष्यवाणी विरुद्ध प्रार्थना अंक | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स दुष्ट भविष्यवाणी विरुद्ध प्रार्थना बुँदाहरू
आज हामी खराब भविष्यवाणीको बिरूद्ध प्रार्थना गर्ने बुँदाहरूसँग व्यवहार गर्ने छौं। के तपाईंले कहिल्यै आफ्नो जीवनको बारेमा खराब भविष्यवाणी सुन्नुभएको छ? के कसैले तपाईंलाई नराम्रो दिएको छ? प्रकाश र त्यो तपाईंलाई यति डरलाग्दो भयो कि तपाईंलाई के गर्ने थाहा छैन? दुष्ट बोलीको बारेमा के हुन्छ? के कसैले तपाईंलाई मृत्युसम्म द condemned्गा गरेको छ? के कुनै पुष्टिले तपाईंलाई भनेको छ कि तपाई जीवनमा कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्न मिल्दैन?
सत्य यो हो कि तपाइँको बारेमा मानिसहरूले के भन्छन् त्यसले केही फरक पार्दैन। मानिसहरूले तपाईंलाई के भनेका छन् परमेश्वरले तपाईंलाई तिनीहरूको बारेमा परिभाषित गर्नुहुन्न। तपाईले आफ्नो अनुहारलाई डरले ढाक्नु हुँदैन किनभने तपाईंलाई मृत्युको भविष्यवाणी गरिएको थियो। प्रार्थनाको माध्यमबाट ईश्वरको अनुहार खोज्नको निम्ति यो उत्तम समय हो। २ राजा २० को पुस्तकमा राजा हिजकियाहको कथालाई याद गर्नुहोस् २० ती दिनहरूमा हिजकियाह बिरामी परेका थिए र तिनी मर्नै लागेका थिए। आमोसका छोरा अगमवक्ता यशैया उनी कहाँ गए र भने, “परमप्रभुले भन्नु भएको छ, 'तिम्रो घरलाई हेर, तिमी मर्ने छौ। तिमी निको हुनेछैनौ। ” हिजकियाह भित्तातिर फर्किए र परमप्रभुलाई प्रार्थना गरे, “हे परमप्रभु, सम्झनुहोस् म कसरी तपाईंको सामुन्ने तपाईंको विश्वासी र सम्पूर्ण हृदयले अनुसरण गरेको छु। हिजकियाह रोए। यशैयाले बीचको चोक छोड्नु अघि, परमप्रभुको यो सन्देश उहाँकहाँ आयो: “फर्कनुहोस् र मेरो प्रजाका अगुवा हिजकियाहलाई भन, 'तिम्रा पिता दाऊदका परमेश्वर परमप्रभु यसो भन्नु हुन्छः' प्रार्थना र तपाईंको आँसु देख्यो; म तिमीलाई निको पार्छु। The।।।।।।।।।।।।।। The तेस्रो दिनदेखि तिमीहरू परमप्रभुको मन्दिरमा जान्छौ। म तिम्रो जीवनमा पन्ध्र बर्ष जोड्नेछु। म तिमी र यस शहरलाई अश्शूरका राजाबाट बचाउने छु। म यस शहरको लागि मेरो अनि मेरो सेवक दाऊदलाई बचाउनेछु। '
कहिलेकाँही दुष्ट अगमवाणी हाम्रो विश्वासको परीक्षा हुन्छन् र हामी प्रार्थनाको स्थानमा कती उग्र छौं। हिजकियाहले भर्खरै आफ्नो भाग्यलाई स्वीकारेर उसको मृत्युको लागि तयारी गर्न सक्थे। यद्यपि उनले बुझे कि कुनै पनि कुरा आउँदैन जबसम्म यो परमेश्वरले आज्ञा नदिउनुभएको हो। र उसलाई थाहा थियो कि ईश्वर थोरै क्षणमा चीजहरूको ज्वलन्त बदल्न सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँ तुरुन्तै प्रार्थनामा परमेश्वरसामु फर्कनुभयो र परमेश्वरले भविष्यवाणी परिवर्तन गर्नुभयो। जब हिजकियाह फर्कने र उनलाई उनको पन्ध्र बर्ष सम्म थप्न भनियो भने पनि अगमवक्ता यशैयाले अदालतको आँगन छोडेका थिएनन्।
धर्मशास्त्र को पुस्तक मा भन्छन् विलाप :3:37 परमप्रभुले बोलेका नहुँदा को हो र यो बोल्ने हो र? कसैले पनि कुनै चीजलाई वास्तविकतामा आउन दिन सक्दैन किनकि यो आज्ञा परमेश्वरले नै दिनु भएको छ। त्यसोभए केहि व्यक्तिले तपाईलाई भनेको धेरै वजन नराख्ने। तपाईं येशू ख्रीष्ट मार्फत परमेश्वरमा एक निर्विवाद पहुँच छ। तपाईं जहिले पनि परमेश्वरसँग प्रार्थनामा जानुहुन्छ र तपाईंको बारेमा जे भनिएको छ त्यो परिवर्तन गर्नुहोस्।
प्रभु येशू, म तपाईको अनुग्रह र सुअवसरको लागि धन्यवाद दिन्छु जुन तपाईले अर्को दिन देख्नु भएको छ, तपाईको नामलाई येशूको नाममा उच्च पारियोस्। यो तपाईंको कृपाद्वारा हो कि म अहिलेसम्म भस्म भएको छैन, म प्रार्थना गर्छु कि तपाईंको कृपा येशूको नाममा निरन्तर ममाथि रहोस्।
प्रभु येशू, धर्मशास्त्र भन्छ, "उहाँ को हुनुहुन्छ जसले बोल्नुहुन्छ र यो घट्ने छ, जब प्रभुले यो आज्ञा नगरेसम्म? हे प्रभु, म तपाईंको जीवनको लागि केवल तपाईंको प्रतिज्ञाहरूमा खडा छु। म येशूको नाममा मेरो जीवनको बारेमा भनिएको हरेक खराब बोली र बोली म मौन गर्दछु।
म मेरो जीवन मा दुष्ट अगमवाणी को हरेक साम्राज्य को नष्ट। मेरो भाग्यको विरुद्धमा काम गर्न खोज्ने राक्षसी कथनहरूको प्रत्येक पर्खाल, म तिमीलाई येशूको नाममा पवित्र आत्माको आगोले डकाउँछु। मेरो जीवन मा हरेक खराब भविष्यवाणी येशूको नाम मा चुप भयो।
मैले ख्रीष्टको रगतबाट एउटा नयाँ करार स्थापित गरेको छु। कलवरीको क्रसमा बगाएको रगतको सद्गुणले, म येशूको नाममा जीवनको नयाँ करारमा ट्याप गर्छु। म येशूको नाममा मेरो जीवनमा पुरानो करार को सबै रूप नष्ट।
प्रभु, मेरो र परिवारको मा मृत्युको हरेक खराब भविष्यवाणी, म भेडाको रगत द्वारा यसलाई रद्द गर्दछ। धर्मशास्त्रमा यो लेखिएको छ, म मर्दिन तर बाँच्नेहरूको देशमा प्रभुको कामका निम्ति घोषणा गर्छु। म येशूको नाममा मेरो जीवनमा मृत्युको सबै खराब बोली रद्द गर्दछु।
प्रभु, मेरो जीवन मा विफलता को सबै दुष्ट भविष्यवाणी, तपाईं येशूको नाम मा आज टुटेको छ। धर्मशास्त्रले भन्छ हामी ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ। मेरो जीवनमा विफलता को हरेक खराब भविष्यवाणी, प्रभुको वचन सुन्नुहोस्, धर्मशास्त्र भन्छ, म संकेत र अचम्मका लागि हुँ, म असफलताको लागि धेरै ठूलो छु, हे असफलताको आत्मा, तिमी येशूको नाममा मेरो बारेमा नष्ट भएका छौ। ।
प्रभु येशू, मेरो जीवन र मेरो परिवारको जीवनमा बिमारीको हरेक भविष्यवाणी, म तपाईंलाई आज येशूको नाममा रद्द। किनकि लेखिएको छ, ख्रीष्टले हाम्रा सबै रोगहरू आफैंमा लिनुभयो र हाम्रा सबै रोगहरू उहाँले निको पार्नुभयो। जीवनमा अशक्तता वा रोग को हरेक रूप येशूको नाम मा शक्ति द्वारा तोडिएको छ।
हे प्रभु, म तपाईंलाई भन्छु कि जीवनमा तपाईको सल्लाह येशू नै मेरो जीवनमा खडा हुनेछ। मसँग अगमवाणी बोल्दछु जो मेरो बारेमा भनिएको छ। म येशूको नाममा शक्ति द्वारा मेरो जीवनमा सबै दुष्ट बोली र राक्षसी श्राप रद्द गर्दछ। किनकि जस्तो लेखिएको छ, ख्रीष्ट हाम्रा लागि श्राप हुनुभएको छ किनकि रूखमा झुण्डिएको व्यक्ति श्रापित छ। म येशूको नाममा मेरो जीवनमा सरापको हरेक अभिव्यक्ति रद्द गर्दछु।
प्रभु, तपाईं महान परिवर्तक हुनुहुन्छ। म आदेश दिन्छु कि तपाईको शक्तिले तपाईले हरेक नराम्रा अगमवाणीहरुलाई येशूको नाममा मेरो निम्ति आशिष र उत्थानमा रूपान्तरण गर्नुहुनेछ।
अघिल्लो लेखमाप्रार्थना पोइन्टहरू तपाईंको सपनाको काम भूमिमा
अर्को लेखमाईश्वरभीरु पतिहरूका लागि प्रार्थना पोइन्टहरू
प्रिन्स जीन जुलाई,, २०२० बिहान १०::2 बिहान
Sallom bien-goalé dans le seigneur। J apprécié énormément Votre travail। कार, ​​Il nous aide beaucoup sur le plan spirituel। क्यु ले सेगनेर भोस सूटियन्स, वाउस इन्पायर, वास फोर्टी एट वास प्रोटेज डेल ला ग्लोवर डे बेन्ट नोम अउ नम्प डी ज्युसस क्रिष्ट!
मुक्ति आवश्यक पर्नेका लागि प्रार्थना पोइन्टहरू